रोजागरी सिर्जना गर्ने मुख्यमन्त्रीको सपना « Anumodan National Daily
रोजागरी सिर्जना गर्ने मुख्यमन्त्रीको सपना
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार ११:०२
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सीप सिकेका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन चैतभित्रै सहुलियत ऋण दिने बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य प्रबद्र्धन र सुदूरपश्चिम साहित्य समाजको आयोजनामा धनगढीमा जारी विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवमा मुख्यमन्त्री भट्टले सहुलियत ऋण दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीको प्रदेश सपना’ शिर्षकमा पत्रकार मनमोहन स्वाँरसंग बहस गर्दै उनले प्रदेशमा रोजगारी सृजना गर्नु आफ्नो ठूलो सपना रहेको बताए ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग तथा स्वरोजगार मार्फत् रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताउँदै मख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार त्यसका काममा लागिपरेको बताए । उनले कृषि आधुनिकीकरण गरेर युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना देखेर प्रदेश सरकारले कृषि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट दोब्बर बनाएको बताए ।
उनले ऊर्जा विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले प्रदेशमा रहेका पश्चिमसेती, पञ्चेश्वर, चिसापानी–कर्णाली जस्ता ठूला आयोजना बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बताए ।
गाउँ गाउँमा पर्यटन केन्द्रहरु स्थापना गरी आयआर्जन बढाएर युवाहरुलाई रोजगार दिनमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि काम अगाडि बढिसकेको बताउँदै उनले त्यसमा समेत युवाहरुले रोजगारी पाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले लगानी भित्र्याएर कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाइरहेको बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारीले काम शुरुवात गरिसकेको तर परिणाम आउन मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘अधिक भन्दा अधिक रोजगारी सृजना गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागेको छ,’ मख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘रोजागरीका लागि भारत र अरु देश जानुपर्ने बाध्यता रोक्ने मेरो पनि सपना हो ।’
विगतमा युवाहरु बाध्यताबस भारत जानु परेको बताउँदै उनले यसको भुक्तभोगी आफू पनि रहेको बताए । ‘यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने सरकारको प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘यो मेरो पनि सपना हो ।’
अर्को प्रशंगमा मुख्यमन्त्री भट्टले जनताको चाहना, ईच्छा, आकांक्षा अनुसार विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । तर उनले विकास एकै पटक नहुने बताउँदै विकास गर्नका लागि आफूहरुलाई समय चाहिने बताए ।
उनले आरामले, मजाले र फुर्सदले काम गर्ने नेपालको सिस्टमले बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको बताए । यसलाई तोड्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताउँदै गतवर्षको भन्दा यस वर्ष केही छिटो काम भएको र अहिलेसम्म अधिकांश योजनाको अख्तियारी दिने काम सकिएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालसम्म यो सिस्टमलाई पूर्ण रुपले बदल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
भ्रष्टाचार र कमिसनले सबै नागरिक र इमान्दार राजतीनिकर्मी पीडित रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले योजना पाउनु पुर्व नै केही दिने सर्त हटाउन प्रदेश सरकारले निगरानी थालेको बताए । उनले यसको पनि परिणाम मात्रै आउन बाँकी रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि निगरानी राख्न जनतालाई आग्रह गर्दै कमिसन लिने भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई माफि नदिने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालय प्रदेश मार्फत् ल्याएर व्यवस्थित गर्ने कि आफ्नो छुट्टै विश्व विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको बताए । उनले संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालय प्रदेशमा दिन नमाने आफ्नो छुट्टै विश्व विद्यालय खोल्ने बताए ।
यसैगरी, विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवमा विद्घताले नधानेको राजनितिमा दुई वक्ताको घम्साघम्सी चलेको छ । साहित्य महोत्सवमा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराइ र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीपगिरी विच सो वीधामा घम्साघम्सी चलेको हो । डा. वावुराम भट्टराईले राज्यसंचालन व्यवस्थापन वर्ग समुदायको पक्षमा निस्पक्षताका साथ कर्म गर्नु नै राजनिती भनेका छन । उनले राजनिति वहुआयामिक हो । जिवनसंग जोडीएको छ उनले ज्ञान विवेकको कमिले राजनीतिको कमी भएको होइन । उनले ज्ञान विवेक नभएकाले पनि राजनीति गरेको उदाहरण छन् र ज्ञान विवेक भएकाले गरेका राजनीति भन्दा पनि राम्रो काम गरेका छन् ।
राजनीतिलाई समय सापेक्षतामा लिएमात्र राजनीति गर्न सम्भव हुने बताउँदै डा. भट्टराईले नेता, इतिहास र वर्तमानको आवश्यकताले जन्मने बताए । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै नीति नेताले बनाउँछ भने कार्यान्वयन कार्यकर्ताले गर्छ, उनले भने ।
सांसद् प्रदिप गिरीले भावनात्मक परिपक्वता नै राजनीति रहेको बताए । उनले विकासको नाममा विनास हैन यसलाई रुपान्तरण गर्न बहसको आवश्यकता रहेको बताए । उनले राजनीति गर्ने मान्छे विद्यता सहित नैतिकतावान पनि हुनु पर्ने बताए । उनले सामान्य दायित्व पुरा गर्नु नै विद्यता रहेको बताउदै उनले बुद्धिविजिले टाढा हेर्छ ।
यसैगरी, ‘साहित्य र राजनीति कति नजिक कति टाढा ?’ शिर्षकमा बहस गर्दै राजेन्द्रसिंह रावल, नैनसिंह महर र डा. जनकराज शाहले राजनीति र साहित्य एकअर्काको परिपुरक रहेको टिप्पणी गरे ।
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति लाहुराम चौधरी र युवा साहित्यकार नारायण रानाले पदमराज जोशीसंग ‘कहर काटिएको जिन्दगी’ मा छलफल गरे । साहित्यकार उत्तमकृष्ण मजगैंया र मीनराज बसन्तले ‘पश्चिमले गर्ला त पुरा आख्यानका अधुरा कुरा’ मा बहस गरे । नयनराज पाण्डेय, भूपिन र राज सरगमले भुपेन्द्र खड्कासंग ‘सीमान्त कथा’ बुने । भुवन दाहाल, टेकराज अवस्थी र राजेन्द्र शाह ‘विपी’ ले तोयथान भट्टसंग ‘सुरमा बगेको सुदूरपश्चिम’ को गहिराई नापे ।